Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Hita izao ny raharaha Hawaii Omicron
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Hita • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Olona iray any Hawaii izay voan'ny COVID-19 teo aloha dia nizaha toetra tsara ho an'ny variana Omicron. Tsy nanao vaksiny mihitsy ity olona ity ary tsy nanana tantara nandeha.
Ny Departemantan'ny Fahasalamana any Hawai'i (DOH) State Laboratories Division (SLD) dia nanamafy fa ny variana SARS-CoV-2 B.1.1.529, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Omicron, dia hita any amin'ireo nosy.
“Tsy anton'ny tebiteby izany, fa antony mampanahy. Fampahatsiahivana fa mitohy ny valanaretina. Mila miaro tena isika amin’ny fanaovana vaksiny, fanaovana saron-tava, fanalavirana araka izay vitantsika ary fisorohana ny vahoaka betsaka”, hoy ny talen’ny fahasalamana Dr. Elizabeth Char, FACEP.
Tamin'ny Alatsinainy Diagnostic Laboratory Services, Inc. (DLS) dia namaritra santionany iray misy marika molekiola milaza fa mety ho Omicron izany. Ny Diviziona laboratoara ao amin'ny fanjakana dia nanao ny filaharan'ny génome iray manontolo ary androany no namaritra ny santionany ny variant Omicron.
Ny olona voan'ny COVID-19 dia mponina ao O'ahu manana soritr'aretina antonony izay efa voan'ny COVID-19 teo aloha, saingy tsy nanao vaksiny mihitsy.
Tranga fiparitahan’ny fiarahamonina ity. Tsy manana tantara nandeha ilay olona.
Ny variana Omicron dia hita any amin'ny firenena 23 farafahakeliny ary fanjakana roa hafa farafaharatsiny.
“Nandritra ny vanim-potoanan'ny areti-mifindra, ny laboratoara-panjakana DOH dia nitarika tamin'ny fanaovana sequence génomique COVID-19, izay no nahafantarana ny variana Omicron. Miasa ny rafitra fanaraha-maso anay. Ity fampandrenesana ity dia fampahatsiahivana mba hitandrina fatratra amin'ny fiarovana ny tenantsika sy ny olon-tiantsika, indrindra mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra", hoy ny Dr. Sarah Kemble, manam-pahaizana momba ny epidemiolojian'ny fanjakana.
"Ny Diagnostic Laboratory Services, Inc. (DLS) dia niara-niasa akaiky tamin'ny Departemantan'ny Fahasalamana hatramin'ny niandohan'ny areti-mifindra", hoy ny Dr. Chris Whelen, filoha lefitra ary tale teknika momba ny mikrobiolojia sy ny Diagnostika Molecular. "Rehefa hitanay ny fianjeran'ny fototarazo spike, izay famantarana molekiola fa ny viriosy dia mety ho variana omicron, dia notaterinay avy hatrany tany amin'ny DOH State Laboratories ary nandefa azy ireo ny santionany ho an'ny sequence."
Na iza na iza mifandray amin'ny mpanao fanadihadiana momba ny raharaha avy amin'ny DOH dia iangaviana mba hiara-hiasa amin'ny ezaka hampiadana ny fifindran'ny COVID-19. Izay misy soritr'aretina dia asaina manao fitiliana sy manalavitra ny olon-kafa. Ireo olona tsy voan'ny vaksiny izay mifandray akaiky amin'ny olona mitondra ny tsimok'aretina COVID-19 dia manoro hevitra ny hanao fitiliana.
Ny fampahalalana momba ny fitiliana maimaim-poana sy ny vaksiny dia azo jerena eto.